Fiarahaban’ny vehivavy! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Novambra 2018 15:02 GMT
Erwin ao amin'ny The Latin Americanist nilaza fa nitondra “fitomboan'ny asa ho an'ny vehivavy, ary koa ny tsy fisian'ny asa tsara ho an'ny vehivavy, ary ny fihanaky ny fanavakavahana ara-poko sy maha-lahy sy vavy” ity taona ity. Nanamarika ny fitomboan'ny vehivavy loham-panjakana manerana an'i Amerika ihany koa izy, anisan'izany i Michelle Bachelet ao Shily, Portia Simpson-Miller ao Jamaika, ary ilay mirotsaka hofidiana Lourdes Flores amin'ny fifidianana ho avy ao Però.
Nanararaotra ny fotoana i Victor Ruiz, izay manoratra avy any Espaina mba hijery ny laharan'ireo bilaogy isan-karazany ary hilaza izay bilaogy be mpampifandray indrindra (ES) izay nosoratan'ireo vehivavy tamin'ny teny Espaniola. Araka ny voalazan'i Alianzo, enina tamin'ireo bilaogy 100 voalohany no nosoratana vehivavy. Raha nomena laharana tamin'ny alalan'ny isan'ny mpitsidika, bilaogera vehivavy roa no ao anatin'ny laharana 40 voalohany. Ao amin'ny bilaogy 100 voalohany ao amin'ny Atalaya 2005, folo no nosoratan'ny vehivavy. Namintina ny lahatsorany tamin'ny antso mitaky amin'ireo vehivavy bilaogera mba hanova ny isa tsy mifandanja izay anjakan'ny bilaogy tsara laharana avy amin'ny lehilahy ao amin'ny tontolon'ny bilaogy miteny Espaniola i Ruiz.
Vondrona Flickr, 8 de Marzo Día de la Mujer / 8th March Women's Day mankalaza ny andron'ny vehivavy miaraka amin'ny sary vaovao, indrindra avy amin'ny manodidina an'i Amerika Latina sy Espaina.
Bilaogera Shiliana, Roberto Arancibia, tsy miala amin'ny hakanto sy lahatsoratra fohy, nilaza hoe:
Maria Pastora – avy any Santiago, Shily ihany koa – nizara ny eritreriny momba ny andro sy ny antony tsy hisian'izany ho an'ny lehilahy.
Ary farany, nampahafantatra (ES) tetikasa vaovao iray izay nivoaka tamin'ny resadresaka samihafa antserasera tamin'ny Gtalk ireo vehivavy ao ambadiky ny TecnoCHICA. Bilaogy torolàlana amin'ny teny Espaniola ny BlogsMujer.com ary vondrona bilaogera vehivavy akaiky ny BlogHer. Raha ny tokony ho izy, ny lahatsoratra voalohany dia mirary Andro Manerantany ho an'ny Vehivavy ho an'ny rehetra. Patricia Villanueva avy any Mexico City no bilaogera voalohan'ny herinandro tao amin'ny BlogsMujer.com.